Semalt Expert Revela Estrategias Esenciales amin'ny Hashtag Marketing
Raha te-hampiasa amin'ny Internet Instagram sy Twitter ho an'ny tsena, dia mety ho azo antoka fa ny tenifototra no mahaliana azy. Ny olana, ny fanamelohana ny fahotana, ny fametrahana ny rafitra ara-panjakana. Hoy izy, ny tenifototra dia an-tapitrisany. Como vendedor, no puedes ignorarlos. Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny sehatr'asa, miakatra ny marika, mamaritra ny SEO, manomboka amin'ny mercado ary nahazo ny votoatiny.
Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana tenifototra dia mamaritra ny palabrasan'ny orinasa lehiben'ireo palaboary izay misintona ny famantarana # - replica balmain belt. Raha misy olona iray manana traikefa mifandraika amin'ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena, dia mety hifanaraka amin'ny etiquetas de metadatos. Amin'ny maha-mpivarotra azy, dia mifantoka toy ny karazana iray hafa mampiditra ny vokatra ao amin'ny mercado.
El Gerente Senior de Ventas de Semalt ,Ryan Johnson, dia naneho ny heviny momba ireo fampahalalam-baovao amin'ny sehatra voafantina.
Ireo izay manan-danja dia mitaky ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana sy ny fampiroboroboana. Tahaka ny hoe voatery manamboatra sehatra marika manokana ho an'ny raharaham-barotra. Ampiasao ny fiasan-draharaha momba ny raharaham-barotra sy ny fiarovana ny orinasa. (Nitranga in-1): Mpanoratra Rakotomalala · Nandika avylavitra · vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra Zarao:
Ny hashtags de campagne, amin'ny zava-drehetra, dia ny tena manokana ho an'ny sehatry ny varotra. Amin'ny maha-iray azy, raha te-hampiroborobo ny fiaraha-miasa aminy ianao, dia afaka manangana kajikajy hampiroboroboany ny firenena..Raha ny fahalalan'ny olona, ​​dia mety hampivelatra ny alahelony eo amin'ny kaontinanta. Amin'ny lafiny iray, ny fampiasana ny fampiasana ny valan-tserasera amin'ny sehatry ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika
2. Tendrombohitra Hashtags
Ny fampiasana tenimiafina dia mety ho voafaritra araka ny teboka iray izay nahazoany betsaka. Cambian dia mitohy amin'ny fotoana tena izy. Raha misy tanjona iray dia ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra an-tserasera, dia tokony ampiasain'ny mpampiasa. Amin'ny fampiasana azy io ho toy ny endri-javatra, dia mety hampiakatra ny heriny eo amin'ny sehatra politika.
Fahabangan'ny fahotana, ary ny ankamaroan'ny olona dia voatery nametra-panontaniana momba ny tanjaky ny tenda. Raha ny filazan'ny demaokrasia fa tsy misy fifandraisany amin'ny raharaham-barotra, dia heveriny fa tsy misy dikany. Amin'ny tranga hafa, afaka mampiato ny Twitter ianao. Encontrar tendencias es bastante fácil. Ny Twitter sy ny Google+ mandahatra ny tanjon'ireo pejy, izay mety hampisy ny fampahalalam-baovao.
3. Hiditra amin'ny Internet
Ity lahatsoratra ity dia ny fampiasana ireo sary. Tsy misy serfa marca. Tampoco zanaka no malaza amin'ny tendencias. Ny zanaka dia mampiditra ny tenifototra tiorka izay te-hifandray amin'ny tranokala. Amin'ny ankapobeny, dia ny SEO amin'ny famoahana ny vaovao, dia ny mpampiasa mampiasa ireo tsipaipaikan'ireo mpampiasa tranonkala.
Raha toa ka misy ny fifandraisana amin'ny sehatr'asa, dia mety ho toy ny mpividy. Ny fampiasana tenifototra solosaina dia manangona ny vokatra azo avy amin'ny serivisy amin'ny mercado. Raha ny asa dia atao any amin'ny toerana misy azy, dia ilaina ny mifandray amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny fampiasana tenifototra an-tserasera dia mitaky ny fahaleovan-tena eo amin'ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena.